የአፋር ክልል ልዩ ኃይል በከፈተው ተኩስ 3 ሰዎች ሲሞቱ ከ10 በላይ ቆሰሉ – Kichuu
HomeAmharicየአፋር ክልል ልዩ ኃይል በከፈተው ተኩስ 3 ሰዎች ሲሞቱ ከ10 በላይ ቆሰሉ
የአፋር ክልል ልዩ ኃይል በከፈተው ተኩስ 3 ሰዎች ሲሞቱ ከ10 በላይ ቆሰሉ
በአፋር ክልል አብአላ ከተማ ከፖሊስ በተኮኮሰ ጥይት 3 ሰዎች ሲሞቱ ከ10 በላይ መቁሰላቸውን አንድ የአይን አማኝ ተናገሩ::
የአካባቢው ወጣቶች ወደከተማዋ ሲገቡ የክልሉ ልዩ ኃይል በከፈተው ተኩስ 3 ሰዎች ሲሞቱ ከ 10 በላይ ቆስለው 40 ኪ/ሜ ርቀት ላይ ወደምትገኘው መቀሌ ከተማ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል መወሰዳቸውን የአይን አማኙ ትናግረዋል::
በአሁኑ ሰዓት የመከላከያ ሰራዊት ገብቶ አያረጋጋው ቢሆንም አስከ ቀኑ 8 ሰዓት ረብሻዎች አንደነበሩ ለማወቅ ትችሏል።
Galaalchotn ONN Dhaddechatti Dhiyaatan
(Oromedia – Fulbaana 16,2020) Manni murti dhadhacha tokkoffaa ramaddii Araadaa guyyaa harraa dhimma galaalchota ONN ilaale.
Dhaddecha kana irratti hidhamtoonni 22 akka dhihaatan hubatameera.
Manni murtiis galaalchota kunneen keessa,lamaan isaanif mirga wabii qarshii 4000n akka bahan murteesseera.
Haata’uutii, kanneen hafaniif Jimaatta dhuftuttiakka dhiyaataniif beellamamee jira.
Galaalchota mirgi wabii akka eegamuuf murtaa’e, Yasin Faris, kan haalaan dhukkubsatee jiruu fi Saboontuu Ahamad – ta’uun beekameera.
Hidhamtoota ONN kana irratti hanga ammaatti himanni ifatti dhihaate hin jiru.
Poolisiin amma illee qorannoo irra akka jiru amna murtiitti himeera.
Dhaddechichis galmee kana qoratee murtii kennuuf Jimaataa Fulbaana 18,2020tti beellamee jira.
Gowwaa Salphisuun Jalaa Callisuu!